ကျွန်တော်ပေးမယ်နော်- စာမျက်နှာ2— MYSTERY ZILLION
345 Mobile Devlopment
104 other mobile
ဒီတစ်ခါတော့ ကျနော်ရှာတွေ့ထားတဲ့ anti-virus လေးတွေကို တင်ပါရစေ။ computer သုံးကြတဲ့ လူတိုင်းကိုယ်စီ ဗိုင်းရပ်စ် ပြဿနာကတော့ တစ်မျိုးပီး တစ်မျိုး မရိုးရအောင် ကြုံတွေနေရတာပါဘဲ။ ဒီတော့ အဲကောင်တွေကို ဘာနဲ့ရှင်းမလဲဆိုတာ အရေးကြီးလာဘီလေ။ ဒါကြောင့် ကိုယ် အားသန်ရာ ဆော့ဖ်၀ဲလ်ကို ရွေးချယ် သုံးနိုင်ဖို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ပထမဆုံးတင်မှာက world no 1 ဖြစ်နေတဲ့ kaspersky လေးပါ။ တင်ပြီးသားရှိနိုင်ပေမဲ့ တစ်စုတစ်ေ၀းထဲ ရှိစေချင်လို့လေ...
Kaspersky Anti-Virus Personal 2010 9.0.0.684
ဘာတွေကောင်းတယ်ဆိုတာတော့ ပြောဖို့မလိုလောက်ပါဘူုး။ ကပ်စပါကတော့ ယူဇာတော်တော်များများနဲ့ စိမ်းမယ်မထင်လို့လေ။
လာပြန်ဘီ မြန်မာ Computer user တွေရဲ့ အသဲစွဲလေး။ အန်တီဗိုင်းရပ်လောကမှာ နော်တန် မင်းမူနေစဉ်ကပေါ့... ကျနော်မှတ်မိသလောက် Fleshy လေးနဲ့ စမ်းပွင့်သွားတယ်ထင်တယ်။ Free ဆိုလည်းပေးသုံးတယ်လေ... ဘူလေးလည်းဆိုတော့
Comprehensive protection for your computer! This award-winning product gives you unbeatable Internet security by protecting against viruses, spyware, hackers, spam and malicious websites. AVG Internet Security isareliable and easy-to-use solution for home and small office users which is trusted by millions of users worldwide.
Comprehensive protection for Windows against all online threats from the world's most trusted security company. Use the Internet with confidence in your home or small office.
* Protection against all Internet threats
В· 100% virus detection - AVG's scanning engine has received numerous awards for its excellent detection of "in the wild" viruses, including the VB100% award. Its unique combination of detection methods provides full protection against viruses, worms and trojans.
В· Cutting-edge anti-spyware technology - Using the latest state-of-the-art detection technology, AVG detects spyware, adware, DLL-trojans, keyloggers, and much more. Malware hidden in data streams, archives, or the Windows registry is also detected.
В· Full on-access protection - The powerful AVG Resident Shield provides maximum protection by scanning every file opened, executed, or saved. It also prevents the opening or executing of infected files.
В· Flexible intelligent scanning - The AVG Resident Shield can include/exclude files from being scanned based on individual file extensions and can handle exceptions for potentially unwanted programs such as adware.
В· Full e-mail protection - AVG checks every e-mail sent or received, providing full protection from e-mail-borne threats. AVG supports all leading e-mail clients, including MS Outlook, The bat!, Eudora, and all other SMTP/POP3-based e-mail clients, such as Outlook Express. Encrypted connections using SSL are also supported.
В· E-mail spam and phishing filtering - AVG checks every e-mail received, using the latest technology and up-to-the-minute spam signatures to ensure maximum detection rates for spam and phishing attacks.
В· Automatic threat handling - AVG can automatically heal or remove infected files and other threats such as trojans, worms and spyware.
В· Control over all network access - The AVG Firewall monitors all communication to and from the computer, blocking external attacks and preventing trojans from exporting confidential data. The AVG Firewall configuration wizard automatically creates access rules for all popular software. In addition the firewall can switch profiles automatically, based upon the current conection type, ensuring seamless changeover for notebooks.
В· Powerful scheduling - AVG automatically provides recommended daily schedules for scanning and updating, and also allows you to create custom-scheduled events.
В· Multiple language support - No need to buyaspecial language
В· CPU Intel Pentium, 300 MHz
В· 70 MB free hard drive space
В· 64 MB RAM
ဆာဗာ window 2003 ISA server မှာ သုံးဖို့ အဆင်ပြေတယ့် antivirus လေးတစ်ခုလောက်ပေးပါလား။
Oxford English Dictionary on CD-ROM v.4.0 | 650MB
ifile.it မှာ တင်ပေးလို.ရမလား
MPT user မို. ပါ
mediafire က denied ဖြစ် နေလို.
ဒီနေရာမှာ ရဲရဲ၀ံ၀ံ ဟစ်ကြွေးလိုက်ချင်တာက
online က အစ်ကိုတစ်ယောက်ကောင်းမှုနဲ့ rapid ရဲ့ premium အကောင့်တစ်ခု အခုဘဲရလိုက်ပါပြီ။
အခုတော. limited ဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာကို ကျော်လွှားနိူင်ခဲ့ပြီမို့ rapid ကနေလိုချင်ရင် Link လေးပေးပြီး တောင်းလိုက်ပါ။ ifile ကနေပြန်တင်ပေးပါ့မယ်။
အစ်ကို http://rapidshare.com/files/134344773/keosoft90-super.collection.CD1_downarchive.part1.rar ကိုifileမှာတင်ပေးပါလားpleaseနော်
http://rapidshare.com/files/120386342/C___For_Dummies.rar | 2646 KB
Recover My Files 4.0.0.378
ဖျက်လိုက်တဲ့ ဖိုင်လေးတွေကို ပြန်ပြီး ရီကာဗာလုပ်တဲ့ ဆော့ဖ်၀ဲလေးပါတဲ့...
သူပြောတာကတော့ လုံး၀ ဖျက်မိလိုက်တဲ့ ဖိုင်တွေ၊ ဖေါမတ်ရိုက်လိုက်တဲ့ ဒစ်ထဲကဖိုင်တွေ၊ စစ်စတန်ကြောင့်ဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပျောက်ဆုံးသွားတဲဖိုင်တွေကို ပြန်ရှာနိုင်တယ်ဆိုဘဲ...:39:
အသုံးပြုရလွယ်ကူအောင်လို့ အဆင့်4ဆင့်ပါတဲ့ wizard လေးနဲ့ စတင်ပေးထားတယ်တဲ့...
အဲ ရီကာဗာ လုပ်လို့ရတဲ့ ဖိုင်အမျိုးအစားတွေကတော့ documents, graphic, digital camera photographs, Zip files, email, music, video တွေနဲ့ အခြားအများကြီးရတယ်တဲ့ဗျ...
ဟဒ်ဒစ်မှာတင်မကသေးပါဘူး...ရီမုအေးဘဲ ဒစ်လေးတွေမှာပါ ရီကာဗာလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့က မန်မိုရီစတစ်ထဲက ဖျက်လိုက်တဲ့ ဖိုင်တွေကိုတောင် ရှာနိုင်ဘီပေါ့...
В· Recover deleted files even if emptied from the Recycle Bin
В· Recover formatted hard drives, even if you have reinstalled Windows!
В· Recover your files afterahard disk crash
В· Get back files afterapartitioning error
В· Recover documents, photos, video music & email.
В· Recover from hard drive, camera card, USB, Zip, floppy disk or other removable media
Activation လုပ်တော့ ပြဿနာတတ်နေလို့ပါ လုပ်ပါဦးဗျ:D Offline Manual နဲ့ရွေးလိုက်ပေမဲ့လဲးမရဘူးဖြစ်နေလို့ပါ Key လေးများရှိသေးရင်မစပါဦး
mynnhan wrote: »
ifile.it ကနေပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ..
ifile.it မှာတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ...